एनसेलको सिमकार्डका ग्राहकले आफूसँग भएको थ्रीजी सिमलाई फोरजीमा अपग्रेड गर्दा बोनस सुविधा पाउने भएका छन्। एनसेलले ‘फास्ट फरवार्ड लाइफ’अभियान अन्तर्गतको ल्याएको यो अफरमा सिमकार्डलाई फोरजीमा अपग्रेड गर्दा दुई जीबी डेटा बोनस पाइने जानकारी दिएको छ।
कोभिड-१९ महामारीले सुस्ताएको पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटकमार्फत् प्रवर्द्धन तथा पुनरूत्थान गर्न धम्पुस पीक आरोहण गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्यटन बोर्ड र नेपाल पर्वतारोहण संघको संयुक्त पहलमा दुई महिलासहित ६ जना नेपालीको टोलीले धम्पुस अरोहण गरेका हुन।
नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एकमात्र अधिकारिक वितरक, सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिले विभिन्न कारणवश विदेशबाट नेपाल फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान सार्वजनिक गरेको छ।
विकासको गति यो वर्ष पनि सुस्त, ६ महीना बित्दा पूँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै पूर्वाधार निर्माणको गति यो वर्ष पनि सुस्त देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा विकासलक्षित पूँजीगत खर्च कुल विनियोजनको १४.४ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक : वैदेशिक लगानी एक तिहाइले घट्यो, मूल्य वृद्धि २.९३ प्रतिशतमा सीमित यो वर्ष वैदेशिक लगानी करीब एक तिहाइले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीना (मंसीरसम्ममा) कुल वैदेशिक लगानी अघिल्लो वर्षको यही अवधिका तुलनामा ३१.५ प्रतिशतले घटेर रू. ४ अर्ब ५० करोड कायम भएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा रू. ६ अर्ब ५७ करोड थियो।
व्यवसायमा कोरोना कहर : ५४ प्रतिशत उद्योग मात्रै पूर्ण सञ्चालनमा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण अझै पनि देशका झण्डै नौ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको नेपाल राष्ट्र ब्यांकको अध्ययनले देखाएको छ।
कृषिमा विदेशी लगानी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा हुनुपर्ने, कानूनी आधार नबनाइ खुला नगर्न माग नेपालमा कृषिमा विदेशी लगानी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्रै गर्नुपर्ने सरोकारवालाले माग गरेका छन्। निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थात्रय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेरै कृषिमा विदेशी लगानीको विरोध गरेका हुन्।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा माणिकरत्न
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा माणिकरत्न शाक्य चयन भएका छन्। महासंघको शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको सातौं र आठौ वार्षिक साधारणसभा एवं तेस्रो महाअधिवेशनले आतबार नयाँ अध्यक्षसहितको कार्यसमिति चयन गरेको हो।
पर्यटन बोर्ड बल्ल संघीय संरचनामा, सातै प्रदेशमा पर्यटन कार्यालय स्थापना
नेपाल पर्यटन बोर्डले सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेको छ। बोर्डले आइतबारबाट ती कार्यालयमा कर्मचारीसमेत खटाएको छ। प्रदेश कार्यालयमा प्रबन्धकसहित एक अधिकृतलाई खटाएको बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता मणिराज लामिछानेले बताए।
एनसेलको सिमकार्ड भएका विद्यार्थीले अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयहरू कुनै पनि समय जहाँ भएपनि सजिलै अडियोमार्फत् अध्ययन गर्न सक्ने भएका छन्। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ‘एनसेल अडियो क्लास’ शुरू गरेको छ। जसअन्तर्गत विद्यार्थीले मोबाइलमार्फत् पाठ्यक्रममा आधारित पाठहरू मोबाइलबाटै सुन्दै सिक्न सक्छन्।
लगातार तीन वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार न्यून हुने विश्व ब्यांकको प्रक्षेपण विश्व ब्यांकले यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार अत्यन्तै सुस्त हुने अनुमान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ०.६ प्रतिशतमा सीमित हुने ब्यांकले प्रक्षेपण गरेको हो ।